Akakosha Jo Nesbø. Naiye mugadziri waHarry Hole muMadrid. Zviratidzo | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Hurukuro, Vanyori, Zviitiko, Mabhuku, Noticias, Nhema nhema
Mifananidzo ya (c) Mariola Díaz-Cano uye (c) Getafe Negro
Jo Nesbø anga ari mazuva ano mu Getafe Nhema, mune rake XII chinyorwa iyo yakavharwa nezuro uye yakave seye nyika yevaenzi Norway. Munyori ane mukurumbira we nhema nhema, baba komishinari Harry hole, vakapinda muzviito zvakawanda mu 3 mazuva nemusangano wevatori venhau wakabatanidzwa kupa Banga, rake rekupedzisira bhuku, uye akati wandei misangano nevaverengi. Ichi chakakosha chinhu ndechangu general chronological chronicle neyangu zvimwe zvakanyanya kuratidzwa nezvake, pasina mubvunzo mumwe wevanyori vangu vanonamatwa zvakanyanya. Usapotsa.
1 23/10/2019 - Jo Nesbø naLorenzo Silva (Mutua Madrileña Foundation)
1.1 Njodzi uye kukunda, Mark Twain, uzivi, psychopaths uye "hongu, ini ndakambotora zvinhu zvekunyora."
1.2 Mibvunzo nemhinduro
2 24/10/2019 - Musangano wevatori venhau uye taura kuEspacio Mercado (Getafe)
3 25/10/2019 - Musangano paPedro Salinas Library
3.1 Nguva Dzinosekesa - Zviso zvaHarry Hole
3.2 Mamwe masiginecha uye edhisheni scoop pane mamwe maNesbø mabhuku
4 25/10/2019 - Musangano nevaverengi uye kusaina kuCasa del Libro
5 Maonero angu aJo Nesbø - Iyo charisma yekureruka
23/10/2019 - Jo Nesbø naLorenzo Silva (Mutua Madrileña Foundation)
Njodzi uye kukunda, Mark Twain, uzivi, psychopaths uye "hongu, ini ndakambotora zvinhu zvekunyora."
Mune vanhu vakawanda horo yeMutua Madrileña Foundation iyi hurukuro yakaitika pakati paNesbø naSilva nezve hunhu hwevanhu munhoroondo yematsotsi. Awa nekota yaunogona kuona pano uye yaisanganisira mhinduro dzemibvunzo kubva kuruzhinji. Ehezve ivo vakataurirana nezvechazvino chiverengero chavo Harry Hole akateedzana, Banga, asi zvakare nezve iyo classical njodzi base izvo zvirimo zvese.
Izvo zvaive pamwe iyo yakanyanya kukosha kana yakakomba nguva umo Nesbø akaitirana nharo pamwe nemamongi mukuru saLorenzo Silva pane simba rechitendero nehunhu munharaunda yanhasi. Uye vakasimbisa simba re simba rakaipa uye zvakaitika (Kukundwa uye dhurama) izvo zvinogara zvichikunda pamusoro pezvakanaka (kukunda uye mufaro) nekuti iyo pfungwa nezve yekupedzisira iri-kana zvinoita- mupfupi.
Matauriro iwayo ndiwo anomiririra iyo hunhu hwehunhu hwake uye hupenyu hwake hwekunyepedzera, iyo yatove panzira yekuguma imomo mupurisa wake atorohwa kare haatombokwanisa kuchembera (mune ino ichangoburwa Harry Hole atove kufarira makumi mashanu). Y kune izvo zvisikwa inofanirwawo kuramba yakatendeka kunheyo dzayo uye asinganzwe kugadzikana kubudikidza zvavanofunga kana zvavanogona kubvunza vaverengi vako.
Mhinduro ine joke yakakwana - Nordic, asi joke - yakaenda kumubvunzo waSilva nezve vane vanyori veScandinavia vane chii kazhinji kubudirira kwavakawana. Ikoko Nesbø akaisa toni yakakomba ndokupindura kuti vese vanosangana kamwe chete pagore ku ronga kukunda kwenyika.
Mimwe mibvunzo yaive nezve kuverenga kwako, ayo ari emarudzi ese, asi izvozvi akatarisisa uzivi nekuti mwanasikana wake ari kumudzidza (aive auya naye kuMadrid asi akange asipo). Kana izvo zvakamubata zvakanyanya paakange ari mudiki, izvo zvaive izvo zve Maka Twain -Tom Sawyer uye zviitiko zve Huckleberry finn-.
Kunakidza kwaive kana kumbodaro ndakanga ndine chimwe chinhu kunyora. Akati hongu, kunyange asina kutaura chii, kuti akatanga kunyora kuti aone kuti zvaive sei, uye kuti mangwanani akatevera zvakange zvabuda zvaive marara chaiwo. Imwe yakanaka yaive yake kuzeza kuratidza uye kupfupisa "hongu" kune kana chimwe chinhu chakanaka chichaitika kuna Harry pano neapo. Uye imwe nezve yake maonero nezve Yakakundikana vhezheni the cinematographic of Iye Snowman.
Iyo hurukuro yakapera nemhinduro yekupedzisira kune imwe yeungu ane chimwe chinhu chepfungwa, izvo zvakare yaive "hongu" kunyangwe ichikodzera kuti kune mamwe maprofessional zvakanyanya kutarisana nema psychopathies.
Chiito chakapera ne mufaro mukuru uyezve pakanga paine siginicha pfupi nevamwe vaverengi vakatakura kana kuve nemabhuku. Y kana uchifanira kuisa asi yainge iri nguva iyoyo. Zvimwe iyo pachena kana kuita kunge kwaenda naLorenzo Silva kana anga asingazive zvakawanda nezveNesbø. Uye ngatitii avhareji zera uye ziso rangu rakapenya semuverengi werudzi urwu uye uyu munyori haana kuwedzera zvakawanda.
Kana pamwe, sei isu hatina kutarisira kuti siginecha (izvo Silva akazivisa uye akakumbira kuti arege kuva akareba, asi Nesbø akataura kuti iye haana kana dambudziko uye kuti aizotorawo mifananidzo), mutsetse wakaumbwa Izvo zvaive zvisiri chaizvo kwaari, asi kwe dzosera mahedhifoni ekushandura panguva imwe chete. Saka paive ne kushaya nguva, asi kuti vateveri vakatsiga vanogona kutora mukana wekumukwazisa nekumira naye.
24/10/2019 - Musangano wevatori venhau uye taura kuEspacio Mercado (Getafe)
Zvaive zvinonyadzisa kusakwanisa kuenda pachako, asi haana kundipa nguva yekunyama. Mangwanani akatevera Nesbø aipa musangano nevatori venhau ku Iberostar De Las Letras hotera, yakaziviswa zvikuru munhau. Uye masikati akatora chikamu mu tafura yakakomberedza nezve Nordic News yatove muGetafe Market Space, zvakare naLorenzo Silva nemumwe wake Ruth Lillegraven (munyori we Mune yakadzika fjord) uye Icelandic Ragnar Jonasson (Mumvuri wekutya).
25/10/2019 - Musangano paPedro Salinas Library
Nechekare neChishanu mangwanani Jo Nesbes akapinda musangano nevaverengi ku Veruzhinji Raibhurari Center «Pedro Salinas» Chii chakapa munyori? Anamaria Trillo. Paive zvakare nemupepeti weReservoir Mabhuku uye mukuru wevatori venhau uye kutaurirana kweRamdon House, kuwedzera kune iyo tsika uwandu kubva kumuzinda Noweyi, inova iyo muturikiri we Banga.
Yaive mune mhepo mvura nenzvimbo zvakawanda wepedyo, kunyangwe zvakare munguva shoma. Asi yaishandiswa chaizvo kunyanya mudenderedzwa re mibvunzo nemhinduro kumunyori, izvo zvakare zvaive pamusoro pake mugumo waHarry Hole. Zvakare nezve zita rake raanoda kwazvo munhevedzano, inova Robin, zvekusanganisa zviitiko zvemhuri yake, kunyanya baba vake.
Nguva Dzinosekesa - Zviso zvaHarry Hole
Paivapo vamwe, senge paakasimuka nebhokisi re machokoreti kuti aive patafura uye aida kuigovana nemunhu wese. Kana mhinduro kumibvunzo yakati wandei nezvakataurwa zvakare nezve iyo bhaisikopo.
Uye ndezvekuti mubatsiri akataura kuti anga asina kufarira chero chinhu kungave nekuda kwekuchinjika kana nekuda kweiyo kufanana kwemuviri yemutambi Michael Fassbender kunge a Harry kuti vaverengi vako vese vazive kuti inoyera 1,94, ane mhanza mutsvuku uye inenge nguva dzose inokwana Doc Martens. Saka - akataura achiseka - zvirinani vaigona ndakaisa bhutsu dziya. Nesbø akaseka uye, zvakare nekutsvinya kweNordic, akapindura izvozvo mubvunzo (nzwisisa zvirinani zvisina maturo) Izvo zvaisave zvekuti vakaisa bhutsu kana kwete kunyangwe akarumbidza basa raFassbender uye nemunhu wese mune zvese.
Yaive iripo pandakapinda, , que ndine kwenguva yakareba mukwikwidzi wangu, yakasarudzika uye isingachinjiki, ndiko kuti, semufananidzo waHarry kune muverengi wega wega. Changu ndechemutambi anozivikanwa anobva kunzvimbo idzodzo, Trond Espen Seim, data randakawana mejor Viking / Anglo-Saxon inotaura kuti Mr. Nesbø akakwanisa kusunungura pakupedzisira. "Ah, hongu, mutambi weNorway, ehe, hongu ...". Chishamiso, kunyanya kwandiri, ndechekuti akaramba achiverenga anecdote izvo zvakaita kuti ndisvike kuValhalla yandaida kwazvo:
"Kana chiri chokwadi, zita rake rakabviswa, asi pamberi peiyo projekiti. Iye murume murefu (kutenderedza 1,90 uye ikozvino ashandura 48 Gumiguru) uye, zvakanaka, akanakawo. Chii chimwe zita rangu ndi rimwe zuva nekuti tine shamwari yakafanana. Ini ndaive mune imwe nzvimbo yeruzhinji, zvine hupenyu kubva pane zvandakanzwa kumashure, uye akandiudza kuti akandiverenga uye aida kuva Harry Hole. I told him okay, but chii kana aive nechokwadi chekuti aigona kunwa zvakakwana kana zvakanyanya saHarry. Ipapo akandipindura: «Zvakanaka, ini handizive, asi naMwari ndiri kuedza"".
Mamwe masiginecha uye edhisheni scoop pane mamwe maNesbø mabhuku
Chiitiko ichi chakazopera nekwaziso uye mamwe masiginecha kune vaipinda. Imwe yakanga yauya nemabhuku ayo gumi nemaviri kubva pane akateedzana akasaina naNesbø nemwoyo murefu.
Ndanga ndichitaura na James Bonfill, akandipindura zvichaburitswa riinhi mazita akashaikwa eNesbø: Ropa pachando (Ropa muchando) uye Pakati pehusiku zuva (Pakati pehusiku Zuva), ayo anga ari mune mimwe mitauro kwenguva yakareba. Kuti ndakanga ndatovaverenga, mapfupi uye, kunyangwe iri nyaya dzakazvimiririra kubva kuHole series, zvakaisvonaka, nguva dzose mukati maonero angu ekuzvininipisa.
Zvakanaka, chekutanga yakarongerwa iyo chitubu 2020 and the yechipiri nokuti kupera kwegore iro. Saka tichakamirira chikamu chinotevera chaHarry, isu ticharamba tichive nezvimwe zvakanaka zveNesbø.
25/10/2019 - Musangano nevaverengi uye kusaina kuCasa del Libro
Yaiva iyo wepedyo chiito. Nevakundi vashanu, unobva kumativi ese eSpain, yemakwikwi ekuverenga yakadaidzwa svondo rapfuura nemuparidzi. Uye na nhengo dzinoverengeka dze Akabatwa naJo Nesbø (Ndinozviverengera nekuzvigadzira, hongu) rombo rakanaka kukokwa.
zvakabuda musangano wakasununguka uye muy cómodo. Nenzwi, mibvunzo uye makomenti, uye kunyanya ne yakananga nzira mairi Nesbø akapindura zvese.
Kubva kutsananguro dzake kusvika sei kune rimwe ura mukati Banga, chii chatinotaura ndisingazvizarure zvachose nekuti vamwe vaive vasati vapedza. Kudzokorora kwake mu usafurirwa nemafungiro iwayo, mazano kana kushinga kwevaverengi vako pamberi pemagumo emunhu uyu kana mumwe. Uye kusimbisa kwake pane izvo poindi yekugadzira nzira zvinorevei kukuendesa kune izvo mamiriro , que pamwe wafungidzira kana kwete, asi nguva dzose pasina iwe kuona. Kana pane kudaro, kuti iwe yambira kubata asiwo nguva dzose kutakurwa ndokuwa mariri.
Zvese zvei, kana uchitsvaga nzvimbo idzodzo, vanokushamisa kusvika padanho raunonzwisisa iwe Uye usadzivise kutaura, "Ah chokwadi, ichokwadi." Nekurega basa uye kugamuchirwa, asiwo nemanzwiro e vakafarira zvakanaka kana zvakaipa.
Takakwanisa kutaura naye, akatibvunza kwataibva uye akataura maitiro aanowanzo rangarira dhata nekudaro achizvibatsira yenhabvu, Semuyenzaniso. Ah, izvi zvinobva kune saiti yakadaro, anogona kunge ari muteveri wechikwata chakadai ... jugador nyanzvi mune zvake kuyaruka kusvikira iyo ligaments 19 makore.
Mimwe mibvunzo yangu yaive hongu mumhanzi waanoteerera kana waanofarira (anotamba, anonyora uye anoimba muchikwata chake Iti derre) iriwo raHarry. Akapindura achidaro hongu vanogovana zvakawanda, kunyangwe akademba kuti Harry aisada bhendi rake. Ndokuenda zvinyoro nyoro na a "Handimbofi ndakakuteerera" riinhi Tinokukurudzira kuti uenderere mberi neinotevera Harry nekuti haakwanise kutisiya nemagumo iwayo Banga.
Zvese zvakapera mushure masiginecha nemifananidzo nesu tese taivapo, kunyangwe zvanga zviripo zvishoma paruzhinji, chokwadi. Casa del Libro muGran Vía ndiyo chitoro chepamire muMadrid, asi iyo yakagadzirirwa nzvimbo kune izvi zviito uye, pamusoro pazvose, kana iri nevanhu vehunhu hweNesbø, haisi iyo inonyanya kukosha. Pamusoro pevanhu vashoma ivavo paivepo. Kana iyo nguva yaive yakakodzera kwazvo, asi iyo chinangwa Mr. Nesbø aive zvakaoma. Saka muripo waive wepedyo iyeye luxury naye.
Maonero angu aJo Nesbø - Iyo charisma yekureruka
Vanodaro mumifambo pfupi ndipo paunogona kukoshesa vanhu zviri nani. Uye zvakare izvo haufanire kuvimba nekuonekwa. Chaizvoizvo ndizvo. Mune ino kesi, zvakadaro, iyo zvinhu zvimwe munhu oga. Uye chaizvo kujekesa kare: yangu.
Iwe hausvike kuna Jo Nesbø nemanoveli ake paunenge uri makumi maviri. Kana zvakafanana ne30. Ini ndanga ndichitozadzikisa akasiyana 40 pandakaziva. Iwe unofanirwa kuve nekutangazve semuverengi kazhinji uye mhosva yematsotsi kunyanya. Nekuti iwe unofanirwa kuve nezvakawanda gasket, matumbo, tsinga dzesimbi uye epic kutsungirira kugona kumira pamberi, kunyangwe zviri zvekufananidzira, zvemhuka yekunyora yakaita senge Harry hole.
Asi ndizvo Harry aripo uye yatove shamwari yedu, hapana chakakurudzirwa, hongu. Nesbø atozvitaura kakawanda: "Ndiye mumwe wevaya vaunoshanda navo vaunoenda navo kwevhiki asi neMuvhuro hauvafonere futi." Uye nekuda kwechikonzero ichocho tinonzwa kuti tinomuda, tinomunzwira tsitsi uye kumunzwira tsitsi.
Zvinhu zvakawanda zvakasara mumugodhi weinki kutaurira, pane kubvunza, kuNesbø. Imwe yaive yekuti iwe uchiziva izvozvo, kwete izvozvi mushure mekuverenga Banga asi kare pamberi pazvino, chisikwa chake chakamukunda. Nekuti ine. Kune simba rayo rekukwezva, kufadza uye kupindwa muropa. Nekuda kwekushushikana kwepfungwa kwaanotisiya nguva dzese patinoverenga chimwe chiitiko chinotyisa sezvachiri kugona muhupenyu hwake, kunyepedzera asi chaiko. OZvinoitika sei? mune dzimwe nguva, nekuti ipapo vaverengi vakawanda , que vanomuziva saHarry. Uye iyo Ndinozvitora. Sei?
Nokuti zviri nyore kwazvo kupa Harry nekureruka kwemusiki wake. Izvo chaizvo ndizvo zvinopa charisma iyo makumi zvese. Uye panguva imwechete, uye paine mashiripiti, share zvakare a gangaidzo rakafanana.
Harry chisikwa chakakwana chekusakwana kwevanhu, iine hombodo huru kunyangwe iri bepa. Uye zvinozoitika izvo iyo yeNesbø chaiyoiyo inopesana chaizvo: kusimba uye kunenge kusingabatsiri, sekunge inogona kutyoka chero nguva nechero kuyedza kana kufamba kamwe kamwe. Uye zvakare anomuperekedza kunyara uye kutaridzika kutarisaChii chaunoda kuratidza? kutonhora asi chii chinopfuudza kudziya kana unayo masendimita mashoma. Sezvazvinoita izwi rakaderera uye rinononoka yezwi riya reinzwi mumitauro yezvikamu izvozvo.
Zvese zvake zvinoita kunge ari seti yezvinangwa zvekuyedza kuenda zvisingaonekwe. Asi tora zvinopesana: ndikubate kuti zvive nyore inoshanduka kuita zvisingaenzaniswi hunyanzvi nesimba kugadzira zvakasikwa, nyaya uye akasiyana mavara. Mumwe munhu anofungidzira saHarry Hole akangokwanisa kubuda mundangariro saJo Nesbø's. Ndokureva, hapana mumwe kunze kwaJo Nesbø angadai akaigadzira. Asi kana ku kupenga chiremba chiremba, kana mutsivi mugari wenhaka saSonny Loftus uye mamwe anodanana nemagamba saOlav (Ropa muchando) kana Jon (Pakati pehusiku Zuva). Kana zvakadaro ita zvako vatambi vengano vakaita se Macbeth.
Mashiripiti uye kubudirira ndeyekuzviita, kunyanya nezvenjodzi uye yakarohwa, asi isati yakundwa, chidhakwa mupurisa, ku shamisa vaverengi vakawanda wepasi rose. Kana vari nyaya dzepasirese izvo isu tese tinozviziva nekugovana, asi iwe unofanirwa kuziva kuti ungaiverenga sei Kana iwe unofanirwa kuvaudza nenzira yaakaita. Nezvo kutarisa kwakadzikama uye izvo hunyengeri hunyengeri muviri.
Nokuti zvese zviri muchadenga Nesbø ndeyekushamisa kubva kune rakaderera basa rakanaka. Ehezve, ngatione kana achikwanisa kuzviita rimwe zuva neshamwari mbiri dziya dzaanoti anadzo waasina kugona kubatanidza.
Ndinoda Tenda kuna Getafe Nhema, mutungamiriri wako Lawrence Silva uye mamaneja eRRSS, ku Reservoir Mabhuku, mupepeti waro, Jaume Bonfill, uye timu ye Marketing nekutaurirana kwe Imba Yekunze (Chiuru chekutenda nguva dzose kuna Eva Cuenca). Uye zvechokwadi basa rekududzira, pamwe nevashandi ve Imba yebhuku. Yake cherechedza, Mutsa uye nekureruka kwavakaita zvese kusangana naVaNesbø.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Akakosha Jo Nesbø. Naiye mugadziri waHarry Hole muMadrid. Zvinyorwa
Chinyorwa chakazara kwazvo chinosanganisa zvese zvakarongeka zvematongerwo enyika nechikamu chakanyatsojeka icho chiri manzwiro uye manzwiro akasiyiwa naVaNesbø.
Ini ndakada rondedzero iyi ye "kunyepedzera kusimba" kureva iyo mhuka yemavara ayo anonamatwa Jo.
Kuva nekwanisi yekugadzira Harry (uye kunyanya kugara naye kwemakore mazhinji) zvinoreva simba remukati rinoshamisa, hongu changamire ...
Ndatenda Mariola, nekuita kuti titore chikamu zvishoma mune imwe yenguva dzaigara muGetafe Negro nemudzidzisi mukuru.
Sezvaunotaura, hausvike makumi maviri kana makumi matatu ... asi kana wasvikako haugone kubva.
Kwandiri, kwekunzwa kutarisisa padyo, kwekugovana mweya waHarry Hole uye nekunakirwa masikati asingakanganwike newe, ichave iri imwe yeakanyanya hupenyu hwangu.
Ugh, Arantxa, kumanzwiro angu pamashoko ako. Nomweya wemazuva ano wandinozviziva chaizvo, ndinogonawo kukuudza kuti pane nguva dzakadai dzinoitisa kuti hupenyu uhwu huve nechinangwa, ngatitii pane hure izvo zvakajairika. Uye mushure megore rakashata randave ndirimo, aya manzwiro ndiwo akanakisa kugadzirisa. Saka ndiri kufara kwazvo kuti ino chaiyo nguva yatakabatana nekugovana. Ndinovimba uye kune zvimwe. Ndatenda.
Nhoroondo yakakwana kwazvo. Wanga uri mufaro wakazara kukuverenga iwe uye kugona kutora chikamu, uri kure, mumusangano wakanaka uyu. Ndatenda bhiriyoni. 😘